शिक्षा Archives - Page 30 of 62 - NepalDut NepalDut
पोखरा महानगरको शैक्षिक छात्रवृत्ति : परीक्षाको नतिजा अझै गुपचुप
पोखरा महानगरको शिक्षा महाशाखाले नतिजा प्रकाशन गरेको २४ घण्टा वित्दा समेत गुपचुप राखेको छ । विभिन्न स्कूलबाट एसइई परीक्षा उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीलाई कक्षा ११ मा छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति अनुरुप महानगरले साउन २ बिहीबार गते परीक्षा लिएको थियो । परीक्षामा म्यानेजमेन्टमा २ सय ३२ जना र विज्ञान संकायमा ४ सय ४१ जना गरी ६ सय ७३ जना विद्यार्थी सामेल भएका थिए । जसमध्ये पहिलो चरणमा १ सय १४ जना विद्यार्थी… पुरा पढौ
विद्यार्थी कुट्ने हेमजा बोर्डिङका शिक्षक पक्राउ
गृहकार्य नगरेको आरोपमा विद्यार्थीलाई कुटपिट गर्ने पोखराका एक शिक्षक आज पक्राउ परेका छन् । विद्यार्थीलाई कुटपिट गरेको आरोपमा पोखरा–२५ स्थित हेम्जा आवासीय विद्यालयका शिक्षक श्रीराम त्रिपाठीलाई पक्राउ गरिएको कास्की जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ । सो विद्यालयमा अध्ययनरत १४ वर्षीय एक विद्यार्थीलाई यही साउन ५ गते कक्षा कोठा भित्रै कुटपिट गरेर घाइते बनाएको आरोपलमा अभिभावकको जाहेरी परेपछि ती शिक्षकलाई पक्राउ गरिएको हो । घाइते विद्यार्थीे पोखरास्थित अस्पतालमा उपचार घर घर… पुरा पढौ
न्यू ग्यालेक्सीमा नवआगन्तुक विद्यार्थीको स्वागत
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ३, नदीपुरस्थित न्यू ग्यालेक्सी (उच्च) माविले कक्षा ११ का नवआगन्तुक विद्यार्थीलाई स्वागत तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्यो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष डा. एलियामा जोनको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा विज्ञान संकायमा अध्ययनरत सिसम श्रेष्ठले स्वागत गरेकी थिइन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य लक्ष्मीमाया कायस्थ, विद्यालयका डाइरेक्टर राजु कायस्थ, सहायक प्राचार्य राजेश भण्डारी, विज्ञान संकायका संयोजक दीपक अधिकारी, डिसिप्लिन तथा खेलकुद इन्चार्ज क्याप्टेन वीरबहादुर गुरुङ, एकेडेमिक डीन भरत… पुरा पढौ
वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा तोडफोड र आगजनी
भरतपुरस्थित वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीले सहायक क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा आगलागी र तोडफोड गरेका छन् । क्याम्पस प्रमुख गोविन्द सापकोटाका अनुसार आगजनीबाट सहायक क्याम्पस प्रमुखहरु बस्दै आएको कर्सी, र टेबुल पूर्णरुपमा नष्ट हुनाका साथै कोठामा रहेका दराज, झ्यालका सिसा पनि तोडफोड गरिएको छ । बिहान ९ बजे क्याम्पस परिसरमा आएका विद्यार्थीहरुको समूहले आगजनी गरेको हो । आगजनीका कारण भएको क्षतिको विवरण आइनसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक एकनारायण कोइरालाले जानकारी… पुरा पढौ
लोकसेवाको परीक्षा हुँदै, आरक्षण सुनिश्चितको माग गर्दै रद्द गर्न माग
लोक सेवा आयोगले पछिल्लो पटक प्रकाशन गरेको विज्ञापन रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै बिहीबार अनामनगरस्थित आयोगको कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको छ । आयोगले गत जेठ १५ गते प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तविपरीत प्रकाशन गरेकाले रद्द गर्नुपर्ने माग गर्दै दुईघण्टा प्रदर्शन गरिएको हो । प्रदर्शनमा दलित, जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायतका समुदायको सहभागीता रहेको थियो । आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय… पुरा पढौ
स्कुलमा रक्सी पार्टी , प्रधानाध्यापकसहित ५ प्रक्राउ
बिद्यालय आफैमा एक पवित्र स्थान हो । जहाँ भगवान मानिने शिक्षकहरुले अन्धकारमा रहेका बिद्यार्थीहरुलाई शिक्षाको माध्यमबाट उज्यालोतर्फ लैजाने काम हुन्छ । तर पछिल्लो समय केही व्यक्तिहरुको व्यवहार र गतिविधीको कारण बिद्यालय क्षेत्र समेत बद्नाम हुँदै आएका छन् । यसबीच शिक्षाको मुटु मानिएको चितवनमा एक बिद्यालयमा रक्सी सेवन गर्दै रमाईलो गर्ने गतिविधी भएको छ । कुरा हो र्वी चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–९, स्थित कपरखोरी माध्यमिक विद्यालयको । जहाँ प्रधानाध्यापकदेखि विद्यालय भवन निर्माण… पुरा पढौ
नमूना विकासका लागि विद्यालय छनोट
सरकारले ६९ जिल्लाका ८४ वटा विद्यालयलाई नमूना विद्यालय विकासका लागि छनोट गरेको छ । विभिन्न ६९ जिल्लाका पालिकाहरुमा सञ्चालित विद्यालयहरुको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन पछि शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रले केन्द्रबाट गरेको सत्यापनका आधारमा शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले ती विद्यालय छनोटको निर्णय गरेका हुन् । ०७३ सालबाट शुरु भएको विद्यालय क्षेत्र विकास योजनाको अवधि २०७९ र ८० सालसम्म मुलुकभर एक हजार नमूना विद्यालय विकास गर्ने कार्यक्रम अन्र्तगत चालु आर्थिक बर्षमा १… पुरा पढौ
अन्तरवार्ता छुटेका शिक्षकको परीक्षा साउन ५ गते
शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यामिक तहमा खुल्लातर्फ अन्तरवार्ता दिन छुटेकाहरुलाई जरुरी सूचना जारी गरेको छ । खुल्लातर्फको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गरेको तर, २०७६ साल असार ९ गते विविध कारणबस मौखिक परीक्षा दिन छुटेकालाई अर्को ब्यवस्था गरेको हो । आयोगले विभिन्न कारणसहित छुट्न गएका उम्मेद्धारहरुको लिखित परीक्षा आगामी साउन ५ गते लिने भएको छ । शिक्षक सेवा आयोगको कार्यालय सानोठिमी भक्तपुरमा विहान ७ः३० बजे परीक्षा हुने जनाइएको छ । शिक्षक सेवा… पुरा पढौ
दिउँसो विद्यालय चलाउन अटेर
बागलुङ नगरपालिकाले नगरभित्रका सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयलाई शिशुदेखि कक्षा १२ सम्मको कक्षा दिउँसो चलाउन निर्देशन दिएको छ । शिक्षा ऐन आठौँ संशोधनले विद्यालय शिक्षाका अन्य कक्षाजस्तै कक्षा ११ र १२ लाई पनि दिउँसो चलाउनुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । नगरपालिकाको परिपत्र र निर्देशन नमानी केही विद्यालयले आफूखुशी बिहानी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । उपसचिव शर्माका अनुसार सामुदायिकतर्फ सदरमुकामस्थित विद्यामन्दिर र कालिका कन्या माविले बिहानी कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । संस्थागततर्फ… पुरा पढौ
टाइ, कोट नलगाउँदा कुटिए शिक्षक
हामीले शिक्षकले बिद्यार्थी कुटेको वा बिद्यार्थीले शिक्षक कुटेको सुन्दै र देख्दै आएका छौँ तर भोजपुरमा भने प्रधानाध्यापकले शिक्षक कुटेका छन् । त्यो पनि सामान्य बिषयमा भोजपुर सदरमुकाममा रहेको सगरमाथा इंलिस बोर्डिङ्ग स्कूलका एक शिक्षकलाई आफनै बिद्यालयका प्रधानाध्यापकले कुटेका हुन् । प्रधानाध्यापक रमेश आलेले शिक्षक अतित अधिकारीलाई टाइ र कोट नलगाएको निहुँमा कुटेका हुन् । अधिकारीले प्रधानाध्यापक आलेले खलासीजस्तो भएर स्कुल आउँने भन्दै गाली गरेपछि कुटेको बताए । प्रधानाध्यापक आलले त्यस्तो… पुरा पढौ